समृद्धिको ‘भ्यु टावर’ – eSidhakura
मुख्य पृष्ठविचारसमृद्धिको ‘भ्यु टावर’
काठमान्डौ , गत साउन २९ गते कान्तिपुर दैनिकको शीर्ष समाचारको शीर्षक थियो– ‘प्रधानमन्त्रीको समृद्धि सपना : दमकमा मात्रै दर्जन परियोजना’कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गृह जिल्ला एवं निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै विकासे योजनाहरु पार्नु कुनै नौलो कुुरा भने होइन । यद्यपि सिंहदरबारको सिंहासनमा बसेर समृद्धिको भाष्य निर्माण गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित विकासका परियोजनाहरुमा बजेट खन्याउँदै गर्दा ती परियोजना कस्ता छन् ? तिनीहरु कहाँ केन्द्रित छन् ? तिनले आम नागरिकको जीवनमा कतिको प्रभाव पार्छ ?
उनीहरुको दैनिकीमा कसरी सुधार हुन्छ ? राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान गर्छ ? कति मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुन्छ र कति उत्पादन बढ्छ ? यी यावत पक्षहरु नकेलाउनु चाहिँ गलत हो ।प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रका राष्ट्रिय महत्त्वका ठानिएका ठूला परियोजनाहरुको मिमांस गर्दै कान्तिपुर लेख्छ– दमकमा मात्रै बुद्धमूर्ति बनाउन १५ अर्ब, भ्यु टावर बनाउन ३ अर्ब, विज्ञान पार्क बनाउन २ अर्ब, सडक बनाउन २ अर्ब, पुलहरु बनाउन १ अर्ब ३७ करोड छुट्याइएको छ । यी लगायत अन्य ससाना परियोजनामध्ये झण्डै २४ अर्बको परियोजना प्रधानमन्त्रीको गृहनगर दमकमा मात्रै प्रबन्ध गरिएको छ ।
अहिले सरकारी ‘समृद्धि’को सङ्कथनले राजनीतिक बजार रापिलो छ।गाउँघरदेखि सहरबजारका चोक गल्ली,पुस्तक पसलदेखि रासन पसलसम्म,सरकारी अड्डादेखि व्यापारिक मलसम्म, चिया चौतारीदेखि भट्टी दोकानसम्म विकास र समृद्धिकै पैरवी चलेको छ। झन् दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि त समृद्धिका लयात्मक र काव्यात्मक प्रस्तुतिको ग्रन्थ नै बनिसकेको छ । विकास र समृद्धिका कुरा अब छरपस्टै भए, त्यसैले आवरणमा अब यसको व्याख्या जरुरी देखिएन ।अब कुरा गरौँ समृद्धिको ।समृद्धि न त गाउँघरका कुना कन्दरामा डोजर चढेरै पुग्छ, न त तराईका फाँटहरुमा निर्माण गरिने भ्यु टावरबाटै देखिन्छ ।
यो व्यक्तिको अनुहारमा अभिव्यक्त हुने खुसीको सूचक हो । यसका केही अन्तरवस्तुहरु छन् ।गाउँघरतिर बेलगाम पहाड खोस्रिरहेका समृद्धिका डोजरहरुले वातावरणी सन्तुलन त बिगारेका छन् नै । त्यस्ता हचुवाका भरमा खनिएका बाटाहरुका कारण कैयौँ गाउँमा पहिरोको सन्त्रास बढेको छ । यसै वर्ष पहाडका धेरै ठाउँमा पहिरो गयो । पहिरोमा परी धेरै जनधनको क्षति पनि भयो । अनि धेरै गाउँहरु पहिरोको जोखिममा परेका समाचार आइरहेका छन् ।पहिरोलाई केवल प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा मात्र लिएर हुँदैन। त्यस को जोखिम बढाउने काममा मानवीय कार्यले पनि उत्तिकै भूमिका खेलेको छ ।
हामीले बिना कुनै इन्जिनियरिङ मापदण्ड कमजोर र नाजुक पहाडका डाँडाकाँडातिर डोजर दौडाउँदाको परिणाम पनि हो पहिरोको जोखिम ।तर समृद्धिको डोजर बेरोकतोक चलेकै छ । यसरी खनिएका सडकहरुमा न त मोटरगाडी गुड्छन् न त बर्खापछि तिनको नापनक्सा नै कायम रहन्छ । अनि फेरि हिउँद लागेसँगै पुरानो नापनक्सा खोतल्दै डोजरको बिगबिगी सुरु हुन्छ । यसरी हामीले निकै ठूलो धनराशि प्रत्येक वर्ष हाम्रा सुन्दर डाँडाकाँडाहरु खोतल्नमै सकेका छौँ । के यसैगरी आउँछ सरकारी समृद्धि ? उता तराईंका फाँटहरुमा समृद्धिका भ्यु टावरहरु उसैगरी निर्माण हुँदैछन् ।
मानौँ भ्यु टावर नै हाम्रा सभ्यता हुन्, भ्यु टावर नै समृद्धिका आधार हुन् । भ्यु टावरबिना समृद्धि हेर्नै सकिँदैन !समृद्धि केवल बाहिरी आवरणमा देखिने भौतिक उपलब्धि मात्र होइन, यो व्यक्तिमा अन्तरनिहित सिर्जनशील क्षमताको प्रस्फुटन र त्यसको बजारीकरण पनि हो । थोरै समय र स्रोतको लगानीबाटै व्यक्तिले आफ्ना आवश्यकताहरु पूरा गर्न सक्नु समृद्धि हो । त्यसैले भौतिक विकाससँगै सामाजिक विकास, आत्मिक विकास, समावेशी विकास, वातावरणीय सन्तुलन र व्यक्तिगत खुसी नै समृद्धिका विषयवस्तुहरु हुन् ।